[सम्पादकीय] हेलो सरकार ! देव नारायण यादवलाई तत्काल रिहाई गर | newdnn.com
१६,सोमबार ०३:३० Sangita Rai
काठमाडौँ, १६ असोज । सामान ल्याउन भारतीय बजार गएका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सप्तरी तिलाठीका देव नारायण यादवलाई पक्राउ गरेको छ ।
यादव र उनका छोरा अजयलाई पक्राउ गरेर भारतीय प्रहरीले अपहरणको मुद्धा चलाएको छ । छोरा अजयले भारतीय युवतीसँग विहे गरेपछि त्यसैलाई बाहना बनाएर भारतीय प्रहरीले उनीमाथि अपहरणको मुद्धा चलाएको स्थानीयको भनाई छ ।
तर भारतीय एसएसबीले नेपाली स्वाभिमानीलाई कुल्चदै यादवलाई पक्राउ गरेर अपहरणको मुद्धा चलाएको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले चु सम्म पनि बोलेको छैन ।
यादव तिनै व्यक्ति हुन । जतिबेला तिलाठीमा भारतीय पक्षले एकलौटी सीमा क्षेत्रमा बनाइएको बाँँध भत्काउने नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसक्रममा एसएसबीले अवरोध गर्न खोज्दा उनी रगताम्य भएका थिए ।
संविधान संशोधनका लागि मधेसी दलको आन्दोलन चर्किरहेका बेला यादवले राष्ट्रियको स्वाभिमान लडाईमा अलिकति पनि डर नमानी भारतीय एसएसबीसँग आफ्नो सीमाका लागि मुकाबिला गरेका थिए ।
उनको यही साहसकै कारण मिडियामा पनि सर्वत्र चर्चा भएको थियो भने केही संघसंस्थाले पनि उनलाई सम्मान गरेका थिए । तर आज परिस्थिती उल्टिएको छ ।
मधेसलाई आफ्नो देश र त्यहाँका नागरिकलाई नेपाली हुन भन्ने नठान्ने केही अतिवादी राजनीतिक दल र तिनका नेताले भन्दा यादवले सीमा सुरक्षाका लागि छाती थापेका थिए । यही विषयमा केही विज्ञले भनेका थिए सीमा मिचिदा नेपाल सरकार र काठमाडौँका नेता होइन । मधेसकै नागरिक अगाडी आफ्नो छाती थाप्छन् ।
त्यसैले पनि मधेसी नागरिकको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल लगायतका अगुवाले सरकार र तत्कालिन सरकारलाई एमालेलाई जवाफ फर्काएका थिए ।
तर अहिले उनी भारतीय बजारमा पक्राउ पर्दा अहिलेसम्म पनि कसैको ध्यान त्यता गएको छैन । भारतीय बजारमा पक्राउ परेका यादवका परिवारले दिएको जानकारी अनुसार मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि सरकार चुप लाग्नु रहस्यको विषय बनेको छ ।
भारतसँग लड्नु नै यादवको अपराध हो ?
नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीले अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्छन् । त्यो पनि अपराध गरेको पुष्टि भएपछि मात्रै । तर एसएसबीले यादवलाई पक्राउ गरेर नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि नै हस्तक्षेप गरेको छ ।
गत बर्ष तिलाठीमा आफुले बनाएको बाँध यादव लगायतका स्थानीयले भत्काएपछि एसएसबीले उनलाई निशानामा राखेको थियो । र आइतबार उसलाई पक्राउ गर्ने मौका मिलेपछि हिराशतमा लगिछाड्यो ।
तर सरकारले उनी पक्राउ परेको २४ घण्टा वितिसक्दा पनि सार्वजनिक वक्तव्य सम्म पनि निकाल्न सकेको छैन । यसले प्रष्ट पार्छ नेपालको कुटनीतिक स्तर कतिसम्म कमजोर छ ?
के उनले आफ्नो सीमाका लागि छाती थाप्नु नै अपराध थियो । त्यही अवरोध गरेका कारण नेपाल सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न भारतलाई भनेको थियो ? होइन भने उनको रिहाईका लागि सरकारले किन चु सम्म बोल्दैन ?
आखिर कहिलेसम्म निरीह सरकार ?
सीमा सुरक्षा बलका नाममा नेपाली भुमि अतिक्रमण गरी लगातार हस्तक्षेप गरिरहने भारतविरुद्ध नेपालले अहिलेसम्म बोल्न सकेको छैन । पुर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका प्रत्येक जिल्लामा भारतले लगातार सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
तर सरकारले त्यो भूमिको बारेमा भारतसँग सिधा वार्ता त परै जाओस । कुराको उठान समेत गरेको छैन । अहिलेसम्म जति सरकार परिवर्तन भएपनि कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भुमि अतिक्रमणको विषय उठाएका छैनन् ।
तर यादवलाई खुलेआम हस्तक्षेप गर्दा सरकारले कुनै पनि विषयमा बोल्न नसक्नु निकै निरिहता हो । आम नागरिकले यतिबेला सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् आखिर निरिहता कहिलेसम्म ?
यदि सप्तरीका देवनारायणलाई रिहाई नगर्ने हो भने सीमामा बस्ने कुनै पनि नेपाली पनि सुरक्षित छैनन् । यसका बारेमा सरकारले तत्कालै आफ्नो धारणासहित यादव र उनका छोरालाई रिहाई गर्नुपर्छ । होइन भने यसको विरुद्धमा काठमाडौँ र मधेसका नागरिक सडकमा उत्रिन बेर छैन ।